Gadra sy mpiandry fonja manao asan-jiolahy : vaky ny adin’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny zandary | NewsMada
Gadra sy mpiandry fonja manao asan-jiolahy : vaky ny adin’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny zandary
Toy ny voatsindrim-paingotra foana ny mpiandry fonja tato ho ato. Tao ireo gadra nitsoaka, ka nisian’ny ahiahy fa misy ny firaisana tsikombakomba. Tranga maromaro naneho izany… Vaky am-batolampy ny disadisa eo amin’ny mpandraharahan’ny fonja sy ny zandary.
Ny gadra tratran’ny zandary nanafika tany Vatomandry no nanondro ny mpandraharaha fonja ho niray tendro taminy. Ny teto an-drenivohitra, mpiandry fonja ny nambaran’ny zandary fa manao asan-jiolahy.
Tsy nahatsindry izany ry zareo eo anivon’ny fandraharahana ny fonja ka nitondra valin-kafatra tamin’ny alalan’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety na ny tany Toamasina na ny teto an-dRenivohitra.
Nilaza ny lehiben’ny fonja Ralay Christian, fa efa nisy famindran-toerana laharana faha 03/MC/DGAP/DRAP/Ats/SRPES/Div-IP2017 tamin’ny 10 mey 2017 any amin’ny fonjan’i Soanierana Ivongo, io gadra io ka tsy tokony ho fonjan’ Ambalatavoahangy intsony no asiana resaka. “Misy tompon’ andraikitra manokana hafa any Soanierana Ivongo”, hoy izy. Nolazainy fa diso ny filazan’ny zandary nanononana fa gadra ao Ambalatavoahangy io nanafika io. Nambaran’ ity tompon’ andraikitry ny fonjan’ Ambalatavoahangy ity hatrany fa mikasika ny fisehoan’ny kolikoly eo amin’ny vavahady, momba ny famangiana sy fanaterana sakafo, manatona azy izay sedra izany ka hanoro ilay maka vola sy manao an’izany kolikoly izany.
Ny talen’ny seraseran’ny fitsarana, Napou Jérémie sy ireo mpiara-miasa aminy teny amin’ny trano fiasany eny Faravohitra omaly nanampy ihany koa fa tsy ampy na diso mihitsy ny vaovao aelin’ny zandary. “Tsy ampy ny fanamarinam-baovaon’ny zandary. Mpiandry fonja miza-draharaha ity tratrany teny Andravoahangy nanao fanafihana niaraka tamin’ny gadra nitsoaka fa tsy mpiandry fonja. Efa niasa teny Tsiafahy izy io, ary nafindra toerana sy notapahina ny karamany noho izy tratra tamin’ny fisolokiana ny taona 2013”, hoy ny fanazavana. “Tokony hanontany any amin’ny mpandraharaha fonja ny zandary vao mamoaka vaovao”, hoy ny fanamafisana.
Nanamafy ny zandary
Nohamafisin’ny kaomandin’ny vondrontobim-paritra Atsinanana zandarimariam-pirenena, ny kolonely Ralaikoa Tianarivo Gabriel Armandin, fa ezaka lehibe vitan’ny kompanian’ny zandary tao Vatomandry, tamin’ny nahatrarana taolam-paty efa ho 1.560 kilao sy fisorohana tsy nahatontosa ny fanafihana nokasain’ny jiolahy natao tamina mpandraharaha iray tany Mahanoro. “Tsy ny zandary no te hanonona ny fonjan’ Ambalatavoahangy fa ny jiolahy voasambotra nilaza fa olona mbola mamita sazy ao Ambalatavoahangy izy ary nalefa hiasa any amin’ny “camp pénal“ ao Soanierana Ivongo. Izay ny nahafahany tonga tany Vatomandry hanantanteraka fanafihana satria tsy misy fanaraha-maso ao amin’ny “camp pénal”, raha ny fanazavany nandritra ny famotorana”, araka ny nambaran’ny zandary hatrany. “Tsy tokony hanadio tena fotsiny eo ny sasany fa asa goavana ny fametrahana fandriam-pahalemana”, hoy kosa ny kapiteny Sahivelo Serge Gaetan.